Essential Phone dia mamoaka fanontana voafetra amin'ny loko vaovao | Androidsis
Ny Essential Phone dia tsy fahombiazana lehibe ho an'ny orinasa. Amin'ity fotoana ity dia zavatra tsy dia mahagaga ny olona izany. Ny finday an'i Andy Rubin dia mbola tsy naharesy lahatra ny tsena, ary mbola ambany dia ambany ny varotra ataon'izy ireo. Na dia tsy fitaovana ratsy aza dia toa tsy dia misy liana loatra amin'izany. Na dia manandrana aza ny orinasa.
Raha ny marina, dia gaga ireo mpampiasa miaraka a fanontana voafetra an'ity telefaona tena ilaina ity izay tonga amin'ny loko vaovao eny an-tsena. Safidy loko misy ho an'ny mpampiasa, izay azo antoka fa miaina fiainana vaovao an-telefaona.
Amin'ny androny, rehefa hanomboka eny an-tsena ity fitaovana ity dia antenaina havoaka amin'ny loko roa. Saingy misy antony, ny Essential Phone dia tonga tamin'ny loko tokana teny an-tsena. Toa mitady hamaha-tena izao ilay marika miaraka amin'ity fanontana voafetra ity amin'ny loko maro samihafa.
Tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy ofisialy no nahafahanay nahafantatra momba ireo kinova vaovaon'ny fitaovana ireo. Mahita kinova vaovao izahay. Amin'ny lafiny iray dia manana loko volondavenona matte isika, ary koa famaranana vaovao antsoina hoe "Copper Black", izay mampifangaro ny famaranana manjelanjelatra amin'ny bezel miloko varahina. Na dia izany aza, misy ny kinova amin'ny Essential Phone izay misongadina be.
Ity no kinova fantatra amin'ny anarana hoe «Ocean Depths»Misongadina amin'ny lokony maintso-maitso izay mahasarika ny sain'ny maro. Loko tsy mahazatra eny an-tsena ary tsy isalasalana fa tian'ny mpanjifa betsaka. Ity kinova ity efa azo vidiana amin'ny vidiny $ 599.
Ny sisa amin'ireo kinova amin'ity edisiôna voafetra an'ny Essential Phone ity afaka andro vitsivitsy vao hahatratra ny tsena. Manomboka amin'ny 20 feb mpanjifa izay maniry dia afaka mividy azy ireo amin'ny fomba ofisialy. Ahoana ny hevitrao momba ireo kinova finday vaovao ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Essential Phone dia tonga amin'ny loko vaovao amin'ny fanontana voafetra